एनआईसी एशियाले २० प्रतिशत लाभांश दिन प्रस्ताव - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ कार्तिक ४ गते २०:५४
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । एनआईसी एशिया बैंकले लिमिटेडको संचालक समितिको ४६० औं बैठकले आ.व. २०७६/७७ को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत लाभांश (रू. १ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंकले गत आ.व. २०७६/७७ मा प्रति शेयर आम्दानी रू. ३१.८९ आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने खुद मुनाफातर्फ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ज्यादै कम वाणिज्य बैंकहरू मध्ये यस बैंकले २.४९ प्रतिशत (रू. ७.५२ करोड) को वृद्धि सहित रू. ३ अर्ब ९ करोड आर्जन गर्न सफल भएको थियो ।
बैंकको स्व–पुँजीमा प्रतिफल (च्यभ्) १९.२६ प्रतिशत रहेको छ र यस बैंक स्व–पुँजी प्रतिफलमा मुलुकका निजी क्षेत्रका बैंकहरू मध्ये प्रथम बैंक रहन सफल भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकले चल्ती तथा बचत निक्षेप तर्फ रू. २२.१२ अर्बले वृद्धि गरी सीएएसए मिश्रणको प्रतिशत ४५ पु¥याउन सफल भएको छ जुन समग्र वाणिज्य बैंकहरूको औषत करिब ४४ प्रतिशतको तुलनामा १ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । बैंकले निक्षेप तर्फ पनि साना साना निक्षेप एवम् व्यक्तिगत निक्षेप वृद्धि गर्दै जाने रणनीति अवलम्वन गरी अगाडि बढिरहेको छ ।
जसको परिणाम स्वरूप प्रमुख १० निक्षेककर्ताहरूको अंश बैंकको कुल निक्षेपमा केबल १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।